ပီဒီအက်ဖိုင်တွေကို တစုတစည်းတည်း ထားလို့ရတဲ့နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ပီဒီအက်ဖိုင်တွေကို တစုတစည်းတည်း ထားလို့ရတဲ့နည်း
Posted by manawphyulay on Dec 6, 2011 in Computers & Technology, Software & Links | 20 comments
ယခုအသုံးများတဲ့ ဖိုင် format တွေဟာ ဘယ်ဖိုင်တွေ အသုံးများလည်းဆိုတော့ PDF လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေနဲ့ အီးဘုတ်တွေ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ PDF (Protable Document Format)ကို သုံးကြတာ သတိပြုမိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီ PDF ဖိုင်တွေများလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် PDF စာမျက်နှာတွေများလာတဲ့အခါ စုစည်းဖို့လိုလာပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကို Softplicity Research (www.coolutils.com) က PDF Combine ဆော့ဖ်ဝဲကို ထုတ်လုပ်ကူညီပေးထားပါတယ်။ PDF ဖိုင်များကို ပေါင်းပေးပါတယ်။ merge လုပ်ပေးတယ်ဆိုပါတော့လေ။
PDF Combine က e-book များသာမက invoices, bank statements, contracts စတဲ့ စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း ပေါင်းပေးပါတယ်။ PDF ဖိုင် ဘယ်လောက်များပါစေ ပေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ မိမိအနေနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းကို ဖွင့်လိုက်၊ ဖတ်လိုက်၊ ပိတ်လိုက် လုပ်ရန် မလိုတော့ဘဲ အကြောင်းအရာတူတဲ့ စာအုပ်အများကြီးကို တစ်ဆက်တည်း ဖတ်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာတွေကို အစဉ်အတိုင်း ပြန်စီပေးပါသေးတယ်။ PDF Combine ဟာ ဖိုလ်ဒါအလိုက် ပြောင်းပေးခြင်းသာမက subfolder များကိုလည်း ပေါင်းပေးပါတယ်။ E -book အတွက် Table of Contents ကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ပေါင်းလိုက်တဲ့ဖိုင်အမည်များကို bookmark အဖြစ် ဖော်ပြပေးပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်လည်း bookmark တွေ ပြုလုပ်နိုင်လို့ အသုံးပြုအလွန်လွယ်ကူပြီး ရှာဖွေရ သက်သာစေပါတယ်။ အခမဲ့စမ်းသပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ ဗားရှင်းမှာကိုက အပြည့်အ၀ ပေါင်းဖိုး ပေးထားတာကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမှ မကျေနပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ၀ယ်ချင်တယ်ဆို ၃၉.၉၀ ဒေါ်လာလောက် အကုန်အကျခံပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
အောင်မယ်ငီး ဒေါ်လာ၄၀ကြီးများတောင် များထှာ …
ခိုးသုံးလို့ရတဲ့ နည်းလေးများ မရှိဝူးလား ဟင်င်င်င်
ဟီး ..ခင် လို့ စ တာပါဗျာ…
ကျနော်တို့ (Pirate) လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့
Adobe Acrobat Pro မှာလည်း ပေါင်းလို့ရကြောင်း
ခိုးမသုံးချင်လို့ CIA အရာရှိကြီးလို ၀ယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
Adobe Acrobat X Suit တခုလုံးတောင်မှ ၇၉၉ဒေါ်လာလေးပဲ ကျသင့်ကြောင်းပါ…
ကိုဂီ့ပြောတဲ့ Cloud Computing ကြိုက်သလောက်သုံး ကျသလောက်ရှင်း ဆိုတာနဲ့ သုံးကြည့်ပေါ့။
အဲ့သည့် အဆင့် က SaaS ဗျ …Cloud လို့တော့ ပြောလို့မရသေးဘူး…
ကြုံလို့ ပြောရရင် eBook လို့ အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့ အမျိုးအစားတွေထဲမှာ PDF ဆိုတာ format တမျိုးပဲဗျ
သို့သော် သူသည် industrial standard ဖြစ်နေတယ်ဗျ. ..သည်တော့ eBook=PDF
ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေသည်ပေါ့ …… ကျနော်တို့ search engine လို့ပြောတာနဲ့ Google.comကို ပြေးသလိုပေါ့ဗျာ
တကယ်က အခြား search engine တွေ အနေနဲ့ ပြောပါဆို Yahoo.com တို့ Bing.com တို့ ရှိသေးတယ်လေဗျာ
သီချင်း file format မှာ .wav ဖြစ်နိုင်သလို .mp3(industrial standard) လည်းဖြစ်နိုင်သလိုပေါ့….
ကျနော် media format တွေထဲက international(industrial) standard ဖြစ်လာတဲ့ ဟာတွေအကြောင်း..
ဖတ်နေ ရေးနေတာဗျ ….. ကစ်သိုတို့ ဘဘ ဘလက်တို့က ကျုပ်ကိုပစ်ထားကြလို့ ရေးအားမရှိဖြစ်ပြီး
(ဟီဟိ …….ကျပ်လိုက်ပီ …..)
Adobe Acrobat9Professional မှာလဲ အဲလိုလုပ်လို.ရတယ်.. Combine PDF ဆိုတဲ့ Feature ပါတယ်.. မမနောပြောတဲ့ Software လောက်တော့မစုံဘူးထင်တယ်…
Installer တင်ပေးချင်ပေမယ့် 335 MB ဖြစ်နေလို. စိတ်လျော့လိုက်ပါတယ်ဗျာ..
အင်းနော် အဲလိုသုံးလို့ရရင် ကောင်းမယ်။ တင်ပေးလို့ရရင် ဆော့ဝဲလ်လေးကို စမ်းသုံးချင်လို့။
တစ်ချို့ PDF တွေက ဒေါင်းလောဒ်ချလို့မရဘူးဗျ….။ တစ်မျက်နှာချင်း ဒေါင်းလောဒ်ဆွဲယူရတာ…။ အဲဒါတွေ ဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမလဲ…။
အလကားရတဲ့ ဟာရော မရှိဘူးလားဟင်………..အေမီ သိမ်းထားတဲ့ ebook တွေကများနေပြီ။ အဲဒါတွေကို အစီအစဉ်တကျသိမ်းချင်လို့၊ ပြန်ရှာရင်လည်း လွယ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မမနောရေ။ ခုတော့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ချင်းစီ ဖိုဒါ တစ်ခုစီနဲ့ သိမ်းနေရတယ်။
မီလေးရယ် ..စာရေးဆြာတွေ သီးခြား သိမ်းတာကောင်းဘာဒယ်. ..
ကအင်ဂျီးတို့လို အစွန်းရောက် တွေက ကိုယ့်နဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှ တွဲသိမ်းတာ ကြိုက်ဝူးကွယ့် …
(ကိုယ့်စာ ဖတ်လားမဖတ်လားတောင်မသိဘဲ …သိမ်းသည့်ကိစ္စအထိ ..မထှော်မနန်း ..လျာဝင်ရှည်သွားပါသည်…)
အင်းးးးးးးးးးးး…….software တွေဝယ်သုံးဖို့ကလည်း Visa card ဘာကတ်၊ ညာကတ် တွေမရှိတော့လည်း ခက်သားကလား (ရှိလည်း ဝယ်မသုံးနိုင်တာကျနေတာပဲ အဟဲ…. :P) အစီအစဉ်တကျသိမ်းဖို့ အလကားရတဲ့ software မရှိသေးသရွှေ့တော့ ဖိုဒါတစ်ချင်းစီသိမ်းရမှာပေါ့လေ…
ကအင်ဂျီးရဲ့ စာတွေလည်း ဖတ်ပါတယ် ကအင်ဂျီးရ………….ဝင်ဆွေးနွေး စရာသိပ်မရှိတာနဲ့ ဖတ်ပဲဖတ်တာပါ။ ဒါနဲ့…………စကားမစပ် ကအင်ဂျီးက ဘယ်အစွန်းကိုရောက်တာတုန်း……ပြုတ်ကျဦးမယ်နော…
အင်ကြီးက (အတုကိုပြောတာမဟုတ်ပါ) တောင်စွန်းဆိုပြီး မြောက်ဘက်ရွှေ့တယ်…။ မြောက်စွန်းဆိုရင် အရှေ့ဘက်ရွှေ့တယ်…။ သူ့အစွန်းက မတည်ငြိမ်သေးပါဘူးကွယ်…။ နားခိုရာ ရှာမတွေ့သေးတဲ့ သဘောပေါ့………..။ ကိုကြောင်ကြီးတို့ နေ၀န်းနီတို့လည်း အတူတူပါပဲ…။ ဒါနဲ့ အေမီက ဘာစာအုပ်တွေ စုထားလဲ …။လဲဖတ်မလား တို့ဆီမှာလည်း pdf စာအုပ်တွေတော်တော်များများစုမိနေတယ်…။
ဘယ်တုန်းက အညှိုးနဲ့လဲ မသိ ..
အဘနီ တားတားကို သမသွား၏ …
IT field အရ (၀ါ) ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းအရ ပြောရရင် ကအင်ဂျီးက…ရုပ်ဝါဒီ ဖြစ်ကြောင်းပါ…
လူပီသမှုပိုင်းအရ ကြည့်လျင်တော့ ဟို ဂျာပွန်ဇိမ်ဘုန်းကြီးတို့နှင့် တစ်တန်းထဲ
မထားအပ်သော မြင့်မြတ်သော မွန်မြန်မာ အမျိုးသားလေးဘာကွယ် …………….
အေမီ ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာတွေပဲ ရွေးသိမ်းတာလေ….
မင်းလူ ရှိတယ်၊ နုနုရည်(အင်းဝ)၊ သမိန်ပေါသွပ် ရှိတယ်။ ဆရာမောင်သာရ လေးအုပ်ရှိတယ်။ ကတ္တီပါဖိနပ်စီး ရွှေထီးဆောင်းတော့ မရှိဘူး။ အဲဒါလိုချင်နေတာ။ ကျန်တာတွေကတော့ ဗျောက်သောက်ပဲ
သိန်းဖေမြင့် -အရှေ့က နေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ (ပ-ဒု) သပိတ်မှောက်ကျောင်းသား (ပ-ဒု) မြသန်းတင့် ၊ ကြည်အေး ဒဂုန်တာရာ…။ နတ်နွယ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဖရီးရတဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများ ရှိတယ်…။ 100 ကျော်မလားပဲ…။ မင်းလူတို့ တာရမင်းဝေတို့ မင်းသိင်္ခ တို့တော့ သိမ်းမထားဘူး…။ မောင်သာရက မောင်သာရ၏မောင်သာရ ပဲရှိတယ်…။
ဒီလောက်များနေတာ စက်လေးနေဦးမယ်နော် လေးနီ :P…..
သူ့ဆီမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ပေါ့နော် ပြောတော့ပါဘူးဂျာ ဟဲဟဲ
အော် ဒေါ်လာ ၄၀ တောင် လား။ ဒီအတိုင်းပဲ သိမ်းထားပါတော့မယ်။
အင်တာနက်ရှိ၇င် လည်း PDF ဖိုင်တွေ အလွယ်တကူ ပေါင်းလို.၇ပါတယ်။
http://www.pdfjoin.com/ ပါ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။
အပြင်ဆွဲထုတ်ပြီး ကော်နဲ့ ကပ်ပြီး ဆက်လို့ ကော ရပါသလားခင်ည
http://minus.com မှာ sing up လုပ်ပြီး ရင် 10G သိမ်းချင်တာတွေသိမ်းဖို့ ပေးပါတယ်…။ ဖရီးပါ…။ အဲဒိမှာ သိမ်းကြည့်ပါလား ….။ ပါစင်နယ် လုပ်ထားရင် ဘယ်သူမှမမြင်ရပါဘူး …..။